I-China Oxygen & Nitrogen Factory Project ye-Medical & Industrial Use manufacturers nabaphakeli | NOMA
1: okuzenzakalelayo Ngokugcwele Rotary Air isiguquli.
2: Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi kakhulu.
3: Ukulondolozwa kwamanzi njenge-air compressor kupholiswa umoya.
4: 100% insimbi engagqwali ukwakhiwa ikholomu njengoba ngamunye ASME amazinga.
I-5: I-Oxygen ehlanzekile ephezulu yokusetshenziswa kwezokwelapha / esibhedlela.
Inguqulo ekhishwe nge-Skid (Asikho isisekelo esidingekayo)
7: Isikhathi sokuqala ngokushesha nesikhathi sokuvala.
8: Ukugcwalisa i-oxygen kusilinda ngepompo ye-oxygen
1: Ukucindezelwa okuphansi kwe-rotary air compressors.
2: Ukuhlanzwa Skid kuqedile ngazo zonke izinto.
3: I-Cryogenic Expander enobuchwepheshe be-Booster.
4: Ikholomu yokulungisa ukusebenza kahle okuphezulu kwe-BOSCHI ITALY enelungelo lobunikazi.
I-5: Isistimu yokugcwalisa isilinda se-oksijeni ngepompo ye-oksijeni engenamanzi emanzi.
I-6: Uhlelo lokugcwalisa i-nitrogen cylinder nge-oil free liquid Nitrogen pump. (Uyazikhethela)
Izitshalo zethu zosayizi ophakathi we-oxygen / nitrogen zenzelwe futhi zenziwa ngobuchwepheshe bamuva bokuhlukanisa umoya be-cryogenic, obuthembeke njengobuchwepheshe obusebenza kahle kakhulu besilinganiso esiphakeme sokwenza igesi ngobumsulwa obuphezulu. Sinobuchwepheshe obusezingeni lomhlaba obusivumela ukuthi sakhe izinhlelo zegesi ezimbonini ngokuhambisana namazinga wokukhiqiza nokuklama avunyelwe umhlaba wonke. Imishini yethu yezitshalo yenziwa ngemuva kokufaka eziguquguqukayo ezahlukahlukene kufaka phakathi inani lemikhiqizo enegesi noketshezi okufanele ikhiqizwe, ukucaciswa kobumsulwa, izimo zendawo ezungezile kanye nokulethwa kwengcindezi oyifunayo.
Langaphambilini Isitshalo se-Oxygen segesi yezokwelapha seZibhedlela Sisebenzisa Umshini Wokugcwalisa Oxygen Wezokwelapha
Olandelayo: Okungaguquki Intengo Yokuncintisana China 50nm3 / Hour Psa Industrial / Medical Oxygen Generator High Purity Oxygen Plants
Psa Oxygen Generator Izinsiza kusebenza
Ikhwalithi ephezulu ye-PSA oxygen isitshalo esithengiswayo esishisayo ...
Incazelo Umphumela (Nm³ / h) Ukusetshenziswa kwegesi okusebenzayo (Nm³ / h) uhlelo lokuhlanza umoya ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 I-ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 1: Izimboni zamaphepha neze-Pulp ze-Oxy bleaching kanye ukuhlehliswa 2: Izimboni ze-Glass zesithando somlilo ...
Isitshalo se-Cryogenic oxygen sibiza isitshalo somoya-mpilo
Izinzuzo Zomkhiqizo 1: Umgomo wokwakhiwa kwalesi sitshalo ukuqinisekisa ukuphepha, ukonga ugesi nokusebenza okulula nokugcinwa. Ubuchwepheshe buhamba phambili emhlabeni. A: Umthengi udinga ukukhiqizwa ketshezi okuningi, ngakho-ke sinikezela ngenqubo yokuphinda usebenzise umoya kabusha ukonga ukonga nokusebenzisa amandla ....
Uhlobo lwe-Cryogenic isikali esincane sokuhlukaniswa komoya ...
Izinzuzo Zomkhiqizo Inkampani yethu izibophezele njengomkhiqizi nomhlinzeki wesitshalo se-cryogenic sokuhlukanisa umoya, isitshalo se-PSA oxygen / nitrogen, i-high-vacuum cryogenic liquid tank & tanker namakhemikhali. Futhi ifakwe imishini ehlukahlukene nemishini isiyonke yamaqoqo ama-230, njengemishini yokuphakamisa osayizi abakhulu, ngaphansi kwamanzi p ...
LNG Plant Nitrogen Generator Izinsiza kusebenza Industri ...
I-petroleum gas ehlanganisiwe (i-APG), noma igesi ehambisanayo, uhlobo oluthile lwegesi yemvelo etholakala ngokufakwa kwephethiloli, okungenzeka ukuthi incibilikiswe emafutheni noma "njengekepisi yegesi" yamahhala ngaphezu kwamafutha echibini. Igesi ingasetshenziswa ngezindlela eziningi ngemuva kokucutshungulwa: ithengiswe futhi yafakwa kumanethiwekhi okusabalalisa igesi yemvelo, asetshenziselwa ukukhiqizwa kukagesi esizeni ngezinjini noma ophephela, ...